Imaaraadka iyo Israel oo ay durba ka dhex-tafatay kadib markii ay ka carroodeen qorshaha Netanyahu - Caasimada Online
Home Dunida Imaaraadka iyo Israel oo ay durba ka dhex-tafatay kadib markii ay ka...
Abu Dhabi (Caasimada Online) – Imaaraadka Carabta ayaa iska fogeeyey, islamarkaana walaac xoogan ka muujinaya qorshe uu ra’iisal wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu dani shaqsiyeed ugu adeegsanayo heshiiskii uu la galay Abu Dhabi
Xiisadda siyaasadeed ayaa timid lix bil kadib markii Israel iyo Imaaraadka Carabta ay galeen heshiikii loogu magac dara Abraham, ee caadi looga dhigay xiriirkooda.
Bilooyin kadib, Imaaraadka ayaa Netanyahu ku eedeynaya in uu heshiiskaas u adeegsaday dano doorasho, islamarkaana uusan wax badan soo kordhin, sida ay Saraakiil ka tirsan dowladaas u sheegen taleefishinka CNN.
“Imaaraadku wuxuu u saxiixay heshiiska rajada iyo fursadaha ay siinayaan dadkeenna, ee ma uusan saxiixin danaha shakhsi ee hogaamiyeyaal,” ayuu yiri Sarkaal Imaaraati ah oo la hadlay CNN.
Waxa uu intaas kusii daray “Shaqsiyeynta iyo siyaasadeynta heshiisyada noocaan ah, waxay hoos u dhigayaan ‘guusha taariikhiga ah’, Imaaraadkuna ma qaadi doono wadadaas.”
Ra’iisul Wasaraaha Israel Benjamin Netanyahu ayaa baajiyey safar la qorsheeyey oo uu Khamiista toddobaadkii hore ku tagi lahaa dalka Imaaraadka, kadib markii lasoo wariyey xaalada caafimaad oo lasoo daristay xaaskiisa.
Netanyahu oo doorasho wajahaya afar maalmood kadib ayaa marar badan ku cel-celiyey magaca dhaxal-sugaha Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed isaga oo ku jira olole doorasho, isaga oo isku qeexay inuu yahay ninka fududeeyey heshiisyo maal-gashi oo ku kacaya balaayiin dollar.
Mas’uuliyiinta Imaaraadka ayaa ka carooday in Netanyahu u adeegado doorashada, inkasta oo mar uu kasoo muuqday warbaahinta maxaliga ah uu sheegay “inuusan u safri doonin Imaaraadka ka hor doorashada.”